बबई सभ्यता र हाम्रो संकल्प | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / बबई सभ्यता र हाम्रो संकल्प
बबई सभ्यता र हाम्रो संकल्प
Posted by: युगबोध in विचार March 13, 2018	0 100 Views
दङाली जनताको शिक्षा, सीप र सिर्जनशीलताको उपयो गबाट बन्ने शिष्ट, समुन्नत र सभ्य परिचयलाई दाङ उपत्यकाको स् वरुप, सम्भावना र सुन्दरताको भरपुर उपयो गमा प्रयो ग गरे र निर्माण हुने विशाल संरचना, सुविधा र सम्बन्धको विशिष्ट अवस् थालाई चिनाउन बबई सभ्यताको परिकल्पना गरे र कलम चलाउन थालिएको हो र यो आले ख सातौ ं श्रृंखला हो  । बबई सभ्यतामा प्राण भनेर् काम अध्यात्म अथवा ईश्वरीय चे तनाले गनेर् र उचाइ थप्ने काम आधुनिक सुविधाको प्रबन्धवाट हुने दृढ विश्वास अन्तरनिहीत छ । प्रकृति र प्राणीबीचको अन्यो न्याश्रित सम्बन्धलाई हृदयङ्गम गरे र प्रकृतिमा मानवीय कारणले विचलन आउन नदिन हरित अभियान सञ्चालन गनेर् र मानव जीवनलाई पौ रख, परिश्रम र अनुशासनबाट सुखी, सम्पन्न र खुशी बनाउन बृद्धि अभियान सञ्चालन गनेर् लक्ष पनि बबई सभ्यतामा गर्भित छ । अब प्रश्न उठ्न सक्छ कि बबई सभ्यता कहिले हासिल हुन्छ ? यसको उत्तर हो , यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो  । दाङमा रहे का हरे क व्यक्ति, समुदाय, संघ–संस् था र सरकारको प्रयत्नबाट जे नतिजा प्राप्त हुन्छ त्यसै बाट बबई सभ्यताको आकार र उचाइ निर्धारण हु“दै जाने छ । जति–जति राम्रा– अझ राम्रा काम हु“दै जाने छन् त्यति–त्यति बबई सभ्यता बिराट बन्दै जाने छ । त्यसै ले आध्यात्मिक, आधुनिक र वै भवशाली दाङ उपत्यका बनाउन सबै लाई जगाउने , जो ड्ने र जिम्मे वार बनाउने अमो द्य साधन हो बबई सभ्यता ।
बबई सभ्यताले हरे क व्यक्तिलाई मस् ितष्क सङ्गाल्दै , हृदय पगाल्दै र स् पष्ट मार्गचित्र अङ्गाल्दै स् वर्णिम भविष्य निर्माणमा अघि बढ्न पे ्ररित गर्दछ । धर्मशाला बनाउने , धरमपानी राख्ने , मठ मन्दिर बनाउने , वर पिपल लगाएर विश्रामस् थल निर्माण गनेर् जस् ता परो पकारी कामका दृष्टान्त हाम्रो समाजमा पर्याप्त छन् । तमाम परो पकारी कामले हाम्रा पूर्वजलाई चिन्न र उहा“हरुको आदर्श चरित्रको अनुशरण गर्न हामीलाई प्रे रणा प्राप्त भइरहे को छ । हाम्रो शे षपछि हाम्रा वंशजले पनि हाम्रो यो गदानको सो धखो ज गर्लान् । यो जीवनमा प्राप्त उमे र, यो ग्यता, अनुभव र ओ हो दालाई सधै साथमा राख्न सकिदै न । समय छ‘दा सदुपयो ग गरे सम्मानित र सम्पन्न हुन सकिन्छ । नत्र जीवन व्यर्थमा व्यतित हुन्छ । त्यसै ले आफ्ना यो गदानले समाजलाई सुन्दर बनाउने यो जीवनको अवसर र जिम्मे वारी प्रति हामी सचे त भएर सरिक हुन आवश्यक छ । वास्तवमा जसले समाजमा परो पकारी काम ग¥यो उसकै नाम अजम्मरी हुने अर्थात अरुका नाममा नामसारी नहुुने रहे छ । यथार्थमा यस् तै से वापरायणताको दर्शन बबई सभ्यताको अभ्यन्तरमा सजीव भएर रहे को छ ।
व्यक्ति स् वयं असल नागरिकको रुपमा समाजमा स् थापित हुन नामसारी नहुने विषयको जानकार तथा रचनाकार हुनै पनेर् रहे छ । अन्यथा यो जीवनलाई जीवन्त बनाउने आधार र प्रमाण नरह“दा रहे छन् । मे रो बुवा प्रे मनारायण अधिकारीले नामसारी नहुने दुईवटा काम गर्नुभएको थियो  । आफै ले जग्गा दान दिएर प्राथमिक विद्यालय, शिवपुरको स् थापना र अधिकारी वंशावली निर्माण । उहा“ स् वर्गीय भएर पनि आज उक्त दुईवटा कामले उहा“लाई जीवित बनाइरहे को छ । किनकि उक्त काम हामी सन्ततिहरुमा नामसारी हुनै सक्दै न । तर उहा“ले जो डे को घर–जग्गा–नगदी–जिन्सी त सबै भागवण्डा वा नामसारी भइसके को छ र ती कुरामा अब उहा“ ओ झे ल पदैर् जानुभएको छ । त्यसै ले जीवनमा नामसारी हुने काममा हामी धे रै दौ डन्छौ ं । त्यसरी दौ डे र मात्र हाम्रो जीवन सार्थक बन्न सक्दै न रहे छ । सार्थक जीवनका लागि त नामसारी नहुने काममा हाम्रो ध्यान जानै पनेर् रहे छ । दाङमा दामो दर रो डको प्रसङ्ग उठी राख्छ । उहा“को समयमा भएको काम आज पनि उत्तिकै जीवन्त छ । सायद उहा“ दाङमा बडाहाकिम हु“दा सडक नखनाएको भए आज आमरुपमा उहा“को सम्झना हुने थिएन हो ला । यही नामसारी नहुने कामले उहा“ दाङमा स् मरणीय हुनुहुन्छ । यस् ता दृष्टान्त टरिगाउ“ एयरपो र्टको सन्दर्भमा अथवा जनता महाविद्यालय वा ने पाल संस् कृत विश्वविद्यालय वा महे न्द्र क्याम्पसको स् थापनालगायतका थुप्रै विषयमा भे ट्न सकिन्छ । ती सबैमा विभिन्न अग्रज व्यक्तित्वहरुको यो गदान रहे को छ र उहा“हरु हाम्रो मनमस् ितष्कमा जीवित रहनु भएको छ । यस् तै सुकर्मका उपलव्धिमूलक कामहरु वर्तमान पुस् ताले गरे र भावी पुस् तालाई समे त शाश्वत सत्यको मार्गमा लागिरहन इच्छा जगाउने पवित्र उद्दे श्यबाट बबई सभ्यतालाई दीर्घकालीन सो चको रुपमा अघि सारिएको हो  ।
पाठकहरुलाई लाग्नसक्छ यस् तो कल्पनाशील वा आदर्श वा अमूर्त कुरा किन संप्रे षण गरिरहे को हो ला ? सत्य के हो भने परिकल्पना वा सो चले नै विकासलाई मूर्त बनाउन सघाउ“छ । शून्य परिकल्पनावाट नवसिर्जना सम्भव ह“ुदै न । दाङका सबै प्रकारका पदाधिकारी, प्रतिभा र परिश्रमी–पौ रखीजनहरुमा लौ न अब नामसारी नहुने के ही काम गरौ ं भन्ने भाव जागृत गराएर आ–आफ्नो कर्म क्षे त्रमा लाग्ने उत्पे ्ररणा जगाउन यो प्रयास आरम्भ गरिएको हो  । दाङ– हाम्रा वै भव, हाम्रो गौ रवका रुपमा सजाउन र चिनाउन सर्वस् वीकार्य शीर्षक पहिल्याउ“दै जा“दा बबई सभ्यताको सो च प्रिय, आकर्षक र उत्कृष्ट लागे र अघि सारिएको हो  । नया“ विषयमा प्रवे शगर्दा अतितका आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर नया“ सो च, विचार र व्यवहारमा प्रस् तुत हुन सक्नुपर्दछ । यही मान्यताबाट पे ्ररित भएर बबई सभ्यताको सो चमा पङ्तिकार समाहित भएको हो  । तसर्थ वर्तमान पुस् ता रुपान्तरण भएर रचनात्मक र सिर्जनात्मक काममा हो मिनुपर्दछ । जुन सम्भव छ । सम्राट अशो क भिक्षु भएको , रत्नाकर डा“कु बाल्मिकी ऋषि भएको , सिद्धार्थ गौ तमले राजकाजको वै भव त्यागे को जस् ता दृष्टान्तले मानिस बदलिन सक्छ र महान बन्न सक्छ भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ । त्यसै ले हामीमा पनि रुपान्तरण संभव छ र हामीले गनेर् प्रयत्नले नै हाम्रो टो ल, वस् ती र गाउ“ शहरलाई रुप, सौ न्दर्य र सुविधाले सजाउन सकिन्छ । यस कार्यमा कसले अगुवाई गनेर् भन्ने प्रश्न उठ्नसक्छ । मानिसले जब राज्यको अपरिहार्यतालाई स् वीकार ग¥यो र राज्यको उत्पत्ति भयो त्यही बे लादे खि नै राज्यका तर्फबाट सरकारले हरे क कामको अगुवाइ वा अभिभावकत्व ग्रहण गदैर् आएको छ । राज्यको नजर बाहिर न नागरिक रहन सक्छ न त नागरिकले कुनै काम गर्न सक्छ । यो मान्यता बबई सभ्यतामा पनि लागु हुन्छ । त्यसै ले संघीय संरचनाका सबै सरकारले बबई सभ्यताको भावलाई आत्मसात गर्नु पर्दछ । प्रत्यक्षरुपमा स् थानीय सरकारले स् वामित्व ग्रहण गदैर् यसलाई आवधिक र वार्षिक यो जनामा समावे श गरे र कार्यान्वयन गदैर् जानुपर्दछ । प्रदे श सरकारले सघाउनुपर्दछ । ने पाल सरकारले नै तिक बल प्रदान गर्नुपर्दछ ।
यतिखे र संयो ग जुरे को छ कि घो राही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख पदका उम्मे दवारहरु– जो स् वयंले निर्वाचनका दौ रान बबई सभ्यता कार्यान्वयन गनेर् बाचा गर्नुभएको थियो – विजय भएर आ–आफ्नो पालिकाको सरकारको ने तृत्व गरिरहनु भएको छ । त्यसै ले उहा“हरुमा बबई सभ्यताको विकासका लागि अगुवाई गनेर् दायित्व छ । प्रतिकात्मक रुपमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुखले मे यर कप बबई बीच भलिभल प्रतियो गिता आयो जना गरे र बबई सभ्यताको जगमा इ“टा थप्ने काम गर्नुभएको छ । यसै गरी घो राही उपमहानगरपालिका लगायतका दाङ उपत्यकाका स् थानीय सरकारका प्रमुखहरुले बबई सभ्यताको सुवास फै लाउने काम गर्दै जानुभयो भने दाङको रुप सुन्दरताले सजिने छ र वै भताले भरिने छ । अहिले अकोर् अवसर पनि जुरे को छ । ५ नं. प्रदे शका मुख्यमन्त्री शंकर पो खे ्रल दाङका प्रिय ने ता हुनुहुन्छ र दाङबाट निर्वाचित प्रदे शसभा सदस् य हुुनुहुन्छ । उहा“को दाङप्रतिको दीर्घकालीन सो च र पदीय जिम्मे वारीको लाभ बबई सभ्यताले लिने यो उत्तम अवसर हो  । यसै गरी संघीय प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदमा निर्वाचित कृष्णबहादुर महरा पनि दाङबाट निर्वाचित सांसद हुुनुहुन्छ । उहा“ले दाङका लागि गनेर् ेर् रचनात्मक काम पनि बबई सभ्यतामा जो डिने छ । यसरी जुरे को साइतमा दाङ प्रदे शको राजधानी बन्न सके मा बबई सभ्यताले छलाङ मानेर् छ । यसरी गरिने े प्रयासमा दाङ उपत्यकाबासी हरे क व्यक्तिले आ–आफ्नो तहबाट गनेर् सकारात्मक प्रयत्नहरु खपाउदा बबई सभ्यताको गति तीब्र हुने छ र परिणतिहरु सतहमा स् पष्टरुपमा दे खिन थाल्ने छन् । क्रमशः बबई सभ्यताको सुन्दर चित्र र विशिष्ट चिनारी दे श परदे शमा फै लन थाल्ने छ ।
अब प्रश्न उठ्नसक्छ के दङालीहरु सबै जना बबई सभ्यतामा आबद्धित भएर यो गदान गर्न सक्छन् ? अवश्य सक्छन् । यसका लागि जीवनलाई सफल र असल बनाउने चे तनाबाट संपो षित भइ नामसारी हुने र नामसारी नहुने दुबै प्रकारका सुकर्ममा लाग्न स् वयं उत्प्रे रित भइ भ्रष्ट हुनबाट जो गिइ दाङको जमिन र जीवन बदल्ने सङ्कल्प लिदै सबै ले आ–आफ्नो तहमा से वामूलक र परो पकारी काम गर्न तत्पर हुनुपर्दछ । त्यसका लागि पदाधिकारी, प्रतिभा वा पौ रखी नागरिकमा दृढता प्रकट हुनुुपर्दछ । अगुवाइ गनेर् सरकारी पदाधिकारी र साथ दिने अभियन्ताहरुमा के कुराको पनि बो ध हुनुपर्दछ भने धन सम्पति भन्दा माथि प्रतिष्ठा र सम्मान छ । क्षमता र मे हनतले धन सम्पति कमाउन सकिन्छ र सम्पन्न भइन्छ । परो पकार, भलाइ र से वाले प्रतिष्ठा र सम्मान आर्जन गर्न सकिन्छ । अर्थात प्रतिष्ठा र सम्मान किन्न सकिदै न के वल नामसारी नहुने कामबाट मात्र आर्जन गर्न सकिन्छ । प्रतिष्ठा र सम्मानले े खुशी बनाउ“छ । धनी भएर मात्र खुशी हुन सकिदै न । यही कुरालाई गहिरो स“ग बुझे र इमान, नै तिकता र निष्ठा प्रति अडिग रही असल नागरिक बन्न अग्रसर हुनु पर्दछ । सार्वजनिक जिम्मे वारी सम्हाले का सरकारी पदाधिकारी, कर्मचारी एवं निर्माण व्यवसायी, उद्यो गी, व्यापारी, शिक्षक, प्राध्यापक, चिकित्सक, सञ्चारकर्मी, कलाकार, वै ज्ञानिक, किसान, मजदुर आदि सबै ले आफ्नो आचरणमा शुद्धीकरण, क्षमतामा बृद्धिकरण, कामकाजमा स् तरीकरण र छवि वा चिनारीमा सौ न्दर्यीकरण गदैर् जसले पनि जहिले पनि जहा“ पनि बबई सभ्यताको विराट रुप मस् ितष्कमा राखे र दाङ उपत्यकाको आध्यात्मिक र आधुनिक विकासमा लाग्ने काममा जुटनुपर्दछ । अहिले सही समय भएको छ । किन कि राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि भएका आन्दो लन वा क्रान्तिलाई ने पालको संविधानले संबो धन गरे र अब सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको महाअभियानमा लाग्न घच्घच्याइरहे को छ । यही मौ का छो पे र नवनिर्माणमा हामी लाग्नुपर्दछ । कपटी, स् वार्थी वा अल्छी हुनबाट जो गिएर सिपालु, मे हनती, परो पकारी, सफल र असल बन्ने बाटो मा लाग्नुपर्दछ र यतिखे र इतिहास रच्ने मौ कामा चुके र पछि पछुताउने अवस् था आउन दिनुहुदै न ।
निष्कर्षमा, बबई सभ्यताका लागि मानिसको चे तना, यो जना, तयारी र कार्यान्वयन अपरिहार्य भएकाले दाङबासी दाजुभाइ तथा दिदीबै नीहरुले शे यर्ड भिजनको रुपमा बबई सभ्यतालाई आत्मसात गर्नुपर्दछ । सरकारी जिम्मे वारी सम्हाले का ने ता, कर्मचारी र सार्वजनिक प्रयो जनका से वा सञ्चालन, संरचना निर्माण वा वस् तु बिक्रीमा लागे काहरुले समयलाई चिने र आफ्नो जिम्माको काममा कुनै विलम्ब नगरे र इज्जत, मान र प्रतिष्ठालाई उच्च स् थानमा राखे र जिम्मे वारी सम्पादनमा लाग्नुपर्दछ । अझ दङालीले दाङमा गनेर् सार्वजनिक काममा त अविलम्ब र उच्च गुणस् तरको काम गरे र प्रशंसा आर्जन गर्न सक्नुपर्दछ । अहिले बबई सभ्यतामा हरे क दङालीको यो गदानलाई सुवर्ण अक्षरले सजाउने अवसर विद्यमान छ । आजै बाट हाम्रा सो च, विचार, यो जना र व्यवहारलाई बबई सभ्यतामा आबद्धित गदैर् अघि बढांै  । हामीले चिताएको समृद्ध बबई सभ्यताको सपना साकार पार्न हामी समर्थ हुने छौ ं ।
Previous: युवावस्थामा मौलाइरहेको खानपान र लत
Next: बोक्सीको आरोपमा यातना ः राज्यविरुद्धकै अपराध